Ọgọstụ 1, 2020: ozi nke Nwanyị anyị nyere na Medjugorje | Ilblogdellafede
Ọgọst 1, 2020: ozi nke Nwanyị nwanyị anyị dị na Medjugorje
Childrenmụaka m hụrụ n'anya, Chukwu nyere m oge a dịka onyinye nye gị, ka o wee kuziere gị ma duzie gị n'okporo ụzọ nzọpụta. Ugbu a, ụmụ m, unu aghọtala amara a, mana n'oge na-adịghị anya, oge ga-abịa mgbe ị ga-akwa ụta na ozi ndị a. Maka nke a, ụmụ m, bienụ okwu niile m nyeworo unu n’oge amara a ma mekwaa ekpere ahụ, rue mgbe nke a ga-abụrụ unu ọ joyụ. M na-akpọkarị ndị raara onwe ha nye obi m Obi totọ ka ọ bụrụ ihe atụ maka ndị ọzọ. A na m akpọ ndị ụkọchukwu niile, ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ndị ji okpukpe kpọrọ ihe ka ha kwuo Rosary na ịkụziri ndị ọzọ ikpe ekpere. Childrenmụaka, Rosary hụrụ m n'anya karị. Site na chaplet meghee obi gi aka na m ga enyere gi aka. Daalụ maka ịza oku m.
Otu ebe na Baịbụl nke puru inyere anyị aka ịghọta ozi a.
Ga-asị ụbọchị ahụ: “Daalụ, Onyenwe anyị; I wesoro m iwe, ma iwe gi belatara, I wee kasie m obi. Le, Chineke bu nzọputam; Aga m atụkwasị obi, m gaghị atụ egwu, n'ihi na ike m na abụ m bụ Jehova; Ya onwe-ya bu nzọputam. You ga-eji ọ joyụ wepụta mmiri nke isi iyi nzọpụta. " N'ụbọchị ahụ, ị ​​ga-asị: “Keleenụ Jehova, kpọkuo aha Ya; Gosiputa ihe nile di egwu n'etiti ndi nile. Bụkuonụ Jehova abụ, n'ihi na O mewo oké ihe, Ihe a amawo n'ụwa dum. Tie mkpu ọ andụ na mkpu ọ ,ụ, unu ndị bi na Zaịọn: n'ihi na Onye Nsọ nke Israel dị ukwuu n'etiti unu ”.
← Na post gara aga Gara aga post:Pontifical Academy na-agbachitere akwụkwọ coronavirus nke na-enweghị aha Chineke
Ọzọ Post → Post ozo:Ọgọst 2, ntinye obi na mgbaghara nke St. Francis nke Assisi